I-Metrosexual-Iindlela eziHambekayo kuMadoda aSisitayile | Amadoda aQinisekileyo
Ngoku sinokubandakanya igama elithi metrosexual ngaphakathi kwesigama sethu saseSpain. Imelwe njengesichazi kwaye ichazwa njengendoda, ngokubanzi isini esahlukileyo, ngubani Ukhathalela kakhulu inkangeleko yabo kwaye uchitha ixesha elininzi kunye nemali kukhathalelo lomzimba. Kwaye yilendoda yendoda injalo, umdla wakhe unokuba mikhulu ukuze abe nokhathalelo lomntu ogqibeleleyo.
Ngaba lelo gama Sele ichongiwe emva konyaka we-1994 xa intatheli yase-Bhritane u-Mark Simpson yaqamba igama elithi "metrosexual" ukuzama ukucacisa ngandlela thile onke la madoda abathengi abakhulu bezithambiso kunye neziqholo zokuba babakhathalele. Oko kwenza zonke iimveliso zezithambiso zanyuka zizama ukunikela ngeemveliso zazo ezilungileyo kuzo zonke ezo mfuno ngoku eziqale ukubaluleka emadodeni.
1 I-Metrosexual ayihambelani nobufanasini
2 I-Metrosexuals isengamadoda okwenyani
3 Uhlobo lomntu lwenziwe
4 Uqhubeka njani lo mkhwa?
I-Metrosexual ayihambelani nobufanasini
Hayi, kodwa siza kubeka ezi ngcamango zombini kuba zihamba kunye. Ubufanasini bumisele uqeqesho oluza kuzikhathalela kakhulu, Ngapha koko, ukhathalelo lwabo lukhokelele kwimbono yokuba umntu onesini esahlukileyo uba liqabane lesini.
I-metrosexual ngumntu othanda idolophu, Ugcina ngokwendlela yakutshanje yefashoni, uchitha imali eninzi ukunxiba kakuhle, ukunxiba ijean yomyili, ukukhathalela umzimba wakhe, ukuya ejimini nokutya iimveliso zezithambiso ebusweni. Unomdla kakhulu kuyilo lwangaphakathi, ukupheka kwaye kufuneka baziqhelanise neyoga.
Banokukwazi ukuxutywa kunye nokuzilungisa. Nangona kunjalo, imeko yakhe ayichazi ukuba sele kufuneka elifanasini, kodwa ewe banokuba luhlobo lokuziqhelanisa abafuna.
Uhlobo olwahlukileyo lolu hlobo lwendoda ayibonisi icala lobufazi ngenxa yokukhathalela kakhulu, kodwa enye indlela, Uhlala efuna ukuzithanda kakhulu kwaye abanye bathanda yena kakhulu, kodwa ngaphandle kokungahoyi ubudoda bakhe.
I-Metrosexuals isengamadoda okwenyani
Asisenabo abesilisa bakudala. Kukho amadoda asele eyigcinile imeko yokuba aqhubele phambili, angabathandi bemisebenzi yasendlwini, abakhathalele abantwana babo, abaphekileyo kwaye abanalo nexhala lokuchaza iimvakalelo zabo. Ngaphandle kwako konke oko abayeki ukuya ebharini kwaye baneebhiya zabo, babukele ezemidlalo kwaye baququzelele amatheko nabahlobo kunye nosapho.
Bahlala ngokuvisisanayo ngaphandle kokungahoyi ubudoda babo kunye naloo nto incinci "yabasetyhini". Amadoda angaphantsi kweminyaka engama-40 ubudala sele eqale ngale nkxalabo malunga nokubonakala komzimba ophucukileyo kwaye amadoda angaphezu kweminyaka engama-40 ubudala abekwe kolu hlobo lokhathalelo ukuze aphucule imizimba yabo kunye nezizathu zempilo.
Bangamadoda ahlelwe kuba kufuneka alandele isitayile esefashoni, Bathanda ukutya kwaye bayakwenza ukwakha nokukhusela umfanekiso wabo.
Uhlobo lomntu lwenziwe
Ayaziwa ngokuqinisekileyo ukuba yintoni ebangele le meko. Ngokubanzi, ezi ntlobo zamadoda ziyazinakekela kwaye zenza ngenxa yezizathu ezibini: Benza bazive bonwabile kwaye benze obo buhle baphumelele kubo bonke abo bafazi badumileyo.
Kwabaninzi kwezentlalo nakwingcali yemvelaphi yabantu bakholelwa ukuba olu tyekelo aluyi kuba neziphumo ezibi, kuba isenokuba sisicwangciso esenziwe ziimpawu ezinkulu tsalela ingqalelo kwinani labesilisa.
Kuya kufuneka ubone uninzi losaziwayo abalandela olu khetho, Ngokuqinisekileyo iimveliso ezinkulu zikhuphisana ukunxiba izixhobo zazo kunye neempahla. SinoDavid Beckham owaziwayo njenge-icon yendoda e-metrosexual, kodwa uyalandelwa ngabo bathanda umlo wamanqindi u-Oscar de la Hoya, okanye njengoJared Loreto noJohnny Depp abade basebenzise i-makeup kunye nepeyinti yabo.
Uqhubeka njani lo mkhwa?
Ngakumbi nangakumbi amadoda athatha isigqibo sokuzikhathalela kwaye enze ukhathalelo lwabo eluntwini. Baninzi abasazifihlayo ngokwenza oko ukuze baqhubeke nemeko yabo yokubona okuhle, kodwa amanani-manani atyhila into eyahlukileyo.
Malunga ne-45% yamadoda awanelisekanga ngenkangeleko yawo kwaye enye i-65% ayonwabanga ngesisu sabo. Ukuphulukiswa kwamathumbu esiswini kuye kwaqala ukuthandwa, kunye nokubamba kwakhona ubuso kunye nokwanda kokutyeba emilebeni.
Umxholo wotyando lwezithambiso linyathelo lokugqibela elithathwa ngamadoda ukuphucula inkangeleko yawo. Kuqala zama ukunxiba kwifashoni kwaye iinwele zakho zilungiswe kakuhle. Emva koko, bayila indlela yokuwukhulisa umzimba wabo ngezemidlalo, nditsho nokwenza into encinci yokuthambisa izithambiso, kodwa njengenye indlela yokugqibela, bafuna inyathelo ngokulungiswa kotyando.
Igama elithi metrosexual Okwangoku ingxoxo mpikiswano kunye nekota ngokwesini. Olu hlobo lomntu lulandela iipateni ezifanayo njenge-metrosexual, unakekela umfanekiso wakhe ngokunzulu kodwa ngaphandle kokuwela kwi-narcissism. Ngendlela enye kwenzeka nge yesini ebhekisa kumadoda akhathalayo, nangona umahluko omkhulu ukwimbonakalo ye-disheveled ebonakalayo, ngokubanzi benxibe ijini kunye nehempe ezi-plaid, zinoboya obuninzi bobuso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ukuxubana